30W Anyanwụ kwadoro ìhè okporo ọkụ ọkụ China Manufacturer
Nkọwa:Mbara Igwe Mbara Igwe,Ndabere na Okirikiri Ala Ntanetị,Sun Street Street USA
Home > Ngwaahịa > Mbara Igwe Ochie > 30w Sun Street Street > 30W Anyanwụ kwadoro ìhè okporo ọkụ ọkụ
Oghere Izu Ala nke Watt Street 30 bụ nke zuru oke maka ma ụlọ obibi / ụlọ na ngwa ahịa na ngwepụta dị elu ruo 2500 Lumens! Nke a na- acha ọkụ ọkụ nke dị na windo atụmatụ nke ígwè na ABS na-arụ ọrụ na Smart Sense Technology. Nke a dị ike nke anyanwụ Solar Street USA na- agbanye n'ọchịchịrị, na-aga ike dị elu ma na-alaghachi na ike nkịtị. Anyị na- agbanye ọkụ ọkụ na-ekpuchi anyanwụ nke e ji rụọ ọrụ na Ụlọikpe, Ogige Mpempe, Ebe Ntangọ, Okporo Ụzọ, Ebe Obibi, ma ọ bụ ebe ọbụla na-enyocha ìhè onwe ya! Ike anyanwụ a na-enye ìhè ọkụ ihu emebere iji nye oge mgbanyụ ka ọ ga-arụ ọrụ ụtụtụ.
30W Ogige Ike Power Light Street Fixture Kpọtụrụ ugbu a
30W Atụmatụ Ngwá Ahịa Street Street Akara IP65 Kpọtụrụ ugbu a
Mbara Igwe Mbara Igwe Ndabere na Okirikiri Ala Ntanetị Sun Street Street USA Ebe Mbara Igwe Mbara Igwe Mbara Igwe Mbara Igwe Amazon Mbara Igwe Mbara Igwe ọkụ Mbara Igwe Mbara N'elu Mbara Igwe Mpụga Mpụga Mbara Igwe